ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » နေ့စွဲအကြှနျုပျ၏ပေချိန်းတွေ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး
ကိုယ့်စိတ်ထဲကယုံကြည်ကိုးစား. အရာတစ်ခုခုကိုလက်ျာမခံစားရပါဘူးဆိုရင်, အခွင့်အလမ်းကိုယူအဘယ်ကြောင့်. လျောက်ပတ် Disengage, ဒီအလုပ်မလုပ်ဘူးလျှင်, ရုံ disengage.
စစ်မှန်သောသည်ထိုပွဲကို. သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးသောအခါသင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့ရိုးသား Be, မည်သူမဆိုလှည့်ဖြားကြပါဘူးသင်တို့သည်ဤမျှလမ်းလွဲခံရဖို့မလိုမယ်လို့. ဒါဟာသင် 6'2 များမှာဟန်ဆောင်ဖို့လည်းအလွန်ခက်ပါတယ်″ သင်အမှန်တကယ် 5'6 အခါ″!
တစ်ဦးဓာတ်ပုံတင်ရန်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မိသားစုခွဲခြားသတ်မှတ်မနိုင်သေချာစေပါ, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ, အထဲတွင်နေအိမ်သို့မဟုတ် Car.
ထိန်းချုပ်မှုထားပါ. သင်အားပေးကမ်းကြသူအတိအကျမသိဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလည်းမကြာမီမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအရှုံးမပေးသို့မဟုတ် post ကိုမပြုကြနှင့်.
သင့်ရဲ့အထောက်အထားကာကွယ်ပါ. သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ကြောင့်ငါတို့ကဲ့သို့ site တစ်ခုကိုသုံးပါ.
ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီအတှကျတောငျးဆိုသဖြင့်ဖျားယောင်းခံရမနေပါနဲ့, တစ်စုံတစ်ဦးသည်ငွေသငျသညျတောငျးလြှငျသငျသညျသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချတစ်ပြိုင်နက်ထတည်ကြပြီဟုပင်လျှင်, သူတို့နီးပါးဆက်ဆက်တစ်ဦးလိမ်လည်သူများကိုများမှာ.
သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ထဲမှာရေးထားသောအရာကိုစဉျးစားကွညျ့သောအခါ chatting. ကညာဘက်ကိုသေံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြပါဘူး?
သငျသညျအဘို့မိမိတို့ undying ချစ်ခြင်းမေတ္တာမိန့်တော်မူ၏သူမည်သူမဆိုသတိထား Be, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဖူးဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်.
သငျသညျတွေ့ဆုံရန်အဆင်သင့်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-လူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကြံဉာဏ်ကိုထုတ်စစ်ဆေး အောက်တွင်ဖော်ပြထား
သင့်အိပ်မက်တွေကို၏အွန်လိုင်းနေ့စွဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါပြီဒါမှမဟုတ်သင်ရုံစပ်စုနေသျောလညျးသငျတွေ့ကြံဖို့သဘောတူပြီးပြီထင်. ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအကွံဉာဏျအချို့ကိုအမြန်စကားတွေ့ဆုံဘို့ဖြစ်ကြပြီးနောက်သင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်းတွေ့ဖို့ပြန်လာသောဝါရင့် dater ခံရသို့မဟုတ်စေခြင်းငှါ:
ရက်စွဲတစ်ခုထဲသို့တွန်းချရမနေပါနဲ့, သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင်ပြေနေကြသည်မဟုတ်လျှင်ဆက်ဆက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုကျော်မပေးပါဘူး. သင်သိသောလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်နှင့်သင့်နေ့စွဲယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မဟုတ်လျှင်သင့်အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးလိပ်စာထွက်ပေးဘယ်တော့မှမ.
သငျသညျသူတို့ကိုပင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှီလိင်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးသူမည်သူမဆိုရှောင်ကြဉ်ပါ. လည်းအလွယ်တကူသင်တို့အဘို့အ undying ချစ်ခြင်းမေတ္တာမိန့်တော်မူ၏သူမည်သူမဆိုသတိထား Be.
သင်တွေ့ဆုံကြသူယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းသူတစ်ဦးဦးကိုပြောပြပါ, သငျသညျသွားကြသည်နှင့်သင်စရာဖြစ်ဖို့စီစဉ်ဘယျအခြိနျဘယ်မှာ. သင်၏အကြံအစည်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်တစ်ဦး update ကိုပေးမမေ့မလြော့ပါ.
'၌စစျဆေးဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစီစဉ်’ ပုံမှန်ကြားကာလမှာနှင့်သွားပုံကိုသူတို့ကိုပြောပြ၏တစ်ဦး coded လမ်းရှိ, သငျသညျအကူအညီလိုအပ်အထူးသဖြင့်လျှင်.
ကိုယ့်စိတ်ထဲကယုံကြည်ကိုးစား, သငျသညျအရာတစ်ခုခုမှားယွင်းသည်ထင်လျှင်, သငျသညျယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတစ်ဦးဆင်ခြေဆင်လက်လုပ်ချန်ထားရမည်.
သင့်ရဲ့အစည်းအဝေးရာအရပျမှသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့သင့်နေ့စွဲအပေါ်အားကိုးဘယ်တော့မှမ, အထူးသဖြင့်သင်မမျှော်လင့်ဘဲချန်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကိစ္စတွင်၌သင်တို့ခရီးအိမ်မှာစီစဉ်. သငျသညျတစျဦးလိုနေရာလေးကိုအငှားအရေအတွက်ရှိသည်.